Ultimate FSX sano 3 2 todobaad ka hor #665
Waxaan hayaa Dell taas oo jirta 5 sano. Markii aan iibsaday, qofka iibiyey wuxuu dhahay wuxuu heystaa kaarka sawir-gacmeedka oo ku fiicnaa FSX. Waxay ahayd. Waxaan soo iibsaday kaar vidiyoga dual ah kaas oo ka sii fiicnaanaya laakiin marna sidii ugu fiicnaa aan rabo.
Waa waqtigii la iibsan lahaa desktop cusub. Waxaan rabaa kaarka fiidiyowga ugu fiican iyo wananka suurtagalka ah. Dhibaatada ayaa ah in xaddiddaydu tahay $ 500. Taas ayaa lagu yiri, Uma baahni xirmada, IE, kormeeraha, keyboard-ka iyo jiirka. Waxaan intaas oo dhan helay. Waxaan ubaahanahay kaliya munaarad.
Si aad u noqoto qof daacad ah, anigu si sax ah uma aqaan waxaan u baahanahay. Waxaan galay ciyaaro ciyaaro, kama hadlayo dhanka farsamada kumbuyuutarka, laakiin waxaan jeclaan lahaa caawimaad kasta oo aad i siiso.
Ultimate FSX sano 3 maalin ka hor 1 #682
Waxay u badan tahay inaad hesho GTX 1050 Ti iyo 8gb wanka oo aadan hubin waxyaabaha kale sida cpu. waan ka xumahay laakiin ma aqaano qaybo badan oo ka yar $ 500 wadarta
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: jimidget
Ultimate FSX sano 2 11 bilood ka hor #704
Ultimate FSX sano 2 11 bilood ka hor #705
Jim kaliya u hel faahfaahin, FSX si aad ah ayey ugu tiirsan tahay processor-ka, weyne ka fiican. Haddii aad haysato kaararka xaragada '1gb' waad fiicnaan doontaa. Waxaan ku talin lahaa i5 wanaagsan ama i7 7th gem processor. Waxaan rajeynaynaa inay caawinayso ... AD
Ultimate FSX sano 2 11 bilood ka hor #706
Laakiin markii aad dhahday ugu dambeyntii FSX ma waxaad ka waddaa inaad helaysid lacagbixin addons sidoo kale. Sababtoo ah iyagu waa tayo wanaagsan (badiyaa) waxay u baahan yihiin kaarka muuqaallada wanaagsan Ma ka jawaabi kartaa taas ka hor intaanan kugula talin wax? Iyo sida amberdog1 uu yiri CPU-da wanaagsan waa waajib haddii aad rabto waxqabad wanaagsan.
Ultimate FSX sano 2 10 bilood ka hor #719
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. BTW, Waxaan ahay hawlgab dhakhtar ku soo gala dakhli go'an. Waxaan raadinayay Ebay oo aan ku raadsanayo mashiin ay ku shaqeeyaan nooca buuxa FSX.
Haddii aad fursad u hesho, ma eegi kartaa Ebay oo i caawi inaan mid helo.
Ma suurta galnay inaan kuwada xiriirno emaylka si aan arrimaha u fududaato. emaylkaygu waa Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view.
Ultimate FSX sano 2 9 bilood ka hor #786
jimidget wuxuu qoray: Waad ku mahadsantahay macluumaadka. BTW, Waxaan ahay hawlgab dhakhtar ku soo gala dakhli go'an. Waxaan raadinayay Ebay oo aan ku raadsanayo mashiin ay ku shaqeeyaan nooca buuxa FSX.
Iibintu waxay dhammaataa maalmaha 3. $ 539.99 si dhakhso leh
Ultimate FSX sano 2 9 bilood ka hor #789
Waxaan ku qaatay $ 300 kumbuyuutarrada 'dell laptop' ka ugu fiican ee aan iibsado si wanaagsanna way u socota.
chip jaantus isku dhafan (kaas oo aan kor u qaadi doono markaan lacag helo)
waad sameyn kartaa taas, waxaadna ku qarash gareysaa $ 200 kale ee ku darsan xirfadda.
sida MegaEarthScenery. gobolka ayey maraysaa. ka bilow aaggaaga guriga.
Ultimate FSX sano 2 7 bilood ka hor #820
Waxaan jeclaan lahaa oo keliya in aan tallaabo geliyo oo aan saxo mala-awaalkaan oo ah waxa kaliya ee runtii ah processor-gu hufan. Waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo waxyaabo ay tahay in laga fiirsado markii la helo isticmaalka adag FSX or P3D nooc kasta.
1. FSX iyo P3D ka hor V4 oo ah waxoogaa 64 ah, waxay u muuqdaan inay dhibaatooyin badan ku qabaan waxyaabo isku mid ah. Kuwani waa VAS, OOM iyo Blurries.
2. SSD ma xallin doonto dhibcalada ama dhibaatooyinka xusuusta. Mana hagaajin doonto Dhismaha 'DX 10 preview'.
3 Waad ku yeelan kartaa processor-ka ugu dhakhsaha badan dhulka, laakiin ma aha inay hagaajiso mid kasta oo kore.
Xaddiga xusuusta ee kaararka sawirrada iyo awooddiisa ayaa aad muhiim u ah. Markasta oo kaarka xusuusta badan leeyahay, way yaraaneysaa qaabka aad uheleyso.
Kadibna waxaa jira hagaajinta DX10, oo qaar dhaarta ku dhaartaan qaar kalena aysan taaban taabashada DX10 iyagoo door bidaaya inay kusii nagaadaan DIINUMXcii hore sidaa darteed waxay leeyihiin dhibaatooyin ka yar, weli iyadoo DX9.0c aad leedahay xitaa VAS iyo xilliyada OOM xitaa weyni.
Taasi waa waxa ku saabsan FSX Xaqiiqada ay nala jirtay in ka badan 10 sano, ayaa ah inay si isdaba joog ah u riixeyso makiinadahayaga illaa xadka si aan ugu helno sida ugu wanaagsan ee aan awoodno taas oo gundhigna aan weligeed ku filneyn. Tilmaamtu waxay tahay in la haysto processor wanaagsan, gaar ahaan cimilada skylake i7 7600 (6700k waa dhisme xamaasad leh oo ka socda processor-ka oo ka gaabis ah i7 6700 dhabta ah qaar ka mid ah (processor kasta oo ah ka dib markii uu yahay dhisme ka dambeeya oo gaabis ah) , oo ay ku ciyaarayaan ugu yaraan 1060/1080 8-16GB xagga xusuusta kaararka sawirrada p3d goobta iyo eegida shuruudahooda, waxay aad u badan yihiin bahal isku mid ah oo leh muuqaal kale oo aan kala duwanayn v4) Tan iyo FSX waa 32 bit, waligaa waligaa ma adeegsan doontid wax kabadan 2GB oo xasuusta ah waqti kasta nidaamka. Qalabka processor-ka degdega ah (quad, iska ilaawo wax kasta oo ka yar, qiimaha aad hadda ka iibsan karto) iyo kaarka sawir-qaade dhexe ilaa heer sare ah. Nvidia Grapics waxay si aad ah ugu guuleysteen dagaalka sawirka muuqaalka ah afartii sano ee la soo dhaafay.
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira xasuus yari, sidaa darteed iibsashada kaararka garaafyada cusub ee xusuusta ku filan leh si meesha looga saaro arrimaha VAS ayaan noqon doonin mid rakhiis ah, waan sii hayn doonaa ilaa sanadka cusub, oo aan arko halka ay wax ka taagan yihiin iibsashada sawirada kaarka (kama bixi lahaa jidkeyga si aan u khasaariyo $ 500, sii wado keydinta iyo iibsashada kaarka sawirrada dhammaadka sare ee xusuusta badan, duullimaad kasta oo sim ah ayaa muhiim ah !, processor processor hufan oo ka socda taxanaha i7 taxanaha iXNUMX wuxuu noqon lahaa jidka loo maro) .
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.292